Health TIps Archives - Nepali Quotations
हेर्नुहोस् कस्तो व्यक्तिले उखुको रस खानुहुँदैन। कहिले काँही हामीले दिन भरीको थकाइ मेटाउन उखुको रस पिउन गर्छौ। अज गर्मी ठाउँको मानिसहरूले त सधैँ जसो उखुको रस पिउनी गर्नु हुन्छ। उखु एक गुणकारी पिय पदार्थ हो। उखुमा क्याल्शियम, पोटासियम, आइरन, मग्निसियम र फोस्पोराउस जस्ता पोषण तत्त्व पाइन्छ। शरीरमा रगतको बहावलाई सही गर्न पनि उखुको मदत पूराउँछ।
२८ श्रावण २०७७, बुधबार १६:११
अमलाको जुस पिउनु का फाइदाहरु
संसारमा सबै भन्दा ठूलो धन भनेको स्वास्थ्य हो।स्वास्थ्य राम्रो भयो भने , जति बेला जे काम पनि गर्न सक्छौ तर स्वास्थ्य खराब भयो भने साना तिना काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । जस्तै आफै हिँडडुल गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यदि हामीले गर्ने समानिय दिनचर्यामा खयाल राख्यौ भने पनि हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्छ। जस्तै सधैं अमलाको जुस पिउने
रहरकाे र चनाकाे दालको फाइदा जानेर अचम्मित पर्नु हुनेछ रहरकाे र चनाकाे दालको फाइदा जानेर अचम्मित पर्नु हुनेछ स्वास्थ जिबनशैली अपनाउने क्रममा हामीले हाम्रो खानामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र खानामा प्रोटिनको अंस पनि हुन जरुरी छ। प्रोटिनयुक्त दालको कुरा गर्दा पहिलो नम्बरमा आउँछ चना। चनाको दालमा कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर तौल कम गर्ने गुण हुन्छ र
५ श्रावण २०७७, सोमबार १४:३८
के तपाइँको राती अबेरसम्म मोबाइल चलाउने बानी छ?
के तपाइँको राती अबेरसम्म मोबाइल चलाउने बानी छ? यदि छ भने अन्तसम्म पढ्नुहोला। टेक्नोलोजीले हामीलाई मोबाईल दियो र हामिले हाम्रो जिबनमा तेसलाइ यसरी घुसायेउ कि त्यस चिजले हाम्रो निन्द्रा खान लाग्यो। राती अबेरसम्म मोबाईल प्रयोग गर्दा हाम्रो सरिरलाइ के के हानी हुन्छ तल छोटकरीमा ब्याख्या गरिएको छ। तौल बढ्छ सुत्ने बेलामा मोबाईल फोन प्रयोग गर्नाले
२ श्रावण २०७७, शुक्रबार १४:५२
हेर्नुहोस् त काचो प्याजले यी रोगहरुबाट कसरी बचाउछ ? हेर्नुहोस् त काचो प्याजले यी रोगहरुबाट कसरी बचाउछ ? खानाका परिकारमा मिसाएर वा सलादका रुपमा खाइने प्याज स्वास्थ्यका लागि पनि निकै फाइदाजनक तरकारी हो । केही मानिसहरु प्याजलाई चटनी अथवा चाटका(चख्ना) रुपमा पनि खाने गदर्छन् । काचो प्याज खानु स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक बानी हुनसक्छ ।सल्फर,
३० असार २०७७, मंगलवार १५:५०
राति निन्द्रा लाग्दैन ? अब आधा कागतीको मद्दतले अनिन्द्राको समस्या चैट Nepali Calendar 2077: Click Here राति निन्द्रा लाग्दैन ? अब आधा कागतीको मद्दतले अनिन्द्राको समस्या चैट राती कसरिम समयमा निदाउने? निन्द्रा आएन भने के गर्ने? एस्ता अनेकन समस्याको उत्तर हामिले खोजिरहेका हुन्छौ। आजकल अधिकाशं मानिसहरु राति अबेरसम्म काम गर्ने वा मोवाइल चलाउने गर्छन् ।
मोटोपन घटाउने सजिलो तरिका मोटोपन घटाउने सजिलो तरिका र स्पेसल टिप्सहरु मोटोपनको समस्या नया हैन र यो साम्न्य समस्या हो। सन्सारमा ५ मध्य ३ मान्छे मोटोपनले ग्रसित भएको अनुसन्धानले बताएको छ। जिम, मर्निङ वाक, स्विमिङ, खेलकुद गतिविधिमा सहभागि हुन नमिल्दा वा गर्न नचाहादा वा घर भित्रै बसेर गर्न मिल्ने योग र कसरत पनि एक्लै गर्नुपर्दा
पढेको कुरा नबिर्सने १० टिप्सहरू पढेको कुरा नबिर्सने १० टिप्सहरू विद्यार्थी जिबनमा हामिले धेरै कुरा अध्यन गर्छौ तर त्यो कुरा दिमागमा टिकाइराख्ना सक्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी पढ्न त पढ्छौ तर ती कुराहरू चाडै बिर्सिन्छौ पनि। बिर्सिने समस्याले धेरैलाई सताइरहेको हुन्छ । अझै भन्नू पर्दा यो समस्याले विद्यार्थीलाई धेरै सताएको हुन्छ । धेरै मेहनत गर्ने विद्यार्थी
झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य, मृगौला खत्तम हुन्छ! झुक्किएर पनि नगर्नुहोस् यी कार्य, मृगौला खत्तम हुन्छ! दैनिक जिबनका साना तिनाकुराहरु ख्याल नगर्दा किड्निमा समस्या आउने गर्छ। किडनी अर्थात मृगौला हाम्रो शरिरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो। यसले शरिरमा रगत फिल्टर गर्ने देखि, हार्मोनहरु बनाउने, खनिज पदार्थ सोक्ने, मुत्र रस उत्पागर्ने, टक्सिन अर्थात सरिरको बिकार
२७ असार २०७७, शनिबार १६:०३
पानी पिउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पानी पिउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु पानी एउटा सामान्य कुरा हो र हामिले जन्मदेखी नै पिउदै आयेको कुरा हो। तर यो पिउने पनि तरिका छ र तपाईं कुनै केसमा गलत पनि गरिरहेको हुनसक्नुहुन्छ। पानी पिउँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा पुगोस् भन्नका लागि पनि केहि कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रा बानी व्यवहारहरु सुधारेर सहि तरिका